Af-soomaali | Somali - Oslo kommune
Karantiilka iyo safarka
Dawladda ayaa dejisa xeerarka ku saabsan qofka looga baahan yahay in uu galo hoteelka karantiilka marka uu safar dibedda ah ka soo laabto:
Warbixinta xeerarka arrintaas ka yaalla ka akhriso Helsenorge
Hoteel karantiil oo Oslo ah horey looma sii ballansan karo. Booliska xudduudda ayaa u sheegaya dadka gelaya hoteelka karantiilka, shaqaalaha laammaha dawladda ee xudduudda jooga ayaana dadka safarka ah u kala diraya hoteellada karantiilka ee kala duwan ee ku yaalla Østlandet.
Waxyeellooyinka danbe ee uu keeno waa kuwo fudud oo ayaguna dhammaada maalmo yar kaddib. Marka la gaaro wakhtigi lagu tallaali lahaa degmadaada ayaa kula soo xiriiraysa si ballan laguugu qabto. Xusuuso in aad meesha lagaa helo ku qorto bogga norge.no/oppdater-kontaktinformasjon
Somali: Take a test (PDF 0,1MB)
Somali: COVID-19 vaccine – questions and answers (PDF 0,1MB)
Somali: Wash your hands often (PDF 0,5MB)
Somali: Stay at home if you have cold (PDF 0,5MB)